मधेश बिरोधि कांग्रेस, माओवादी र राजपालाई सजाय दिएर मधेशप्रेमी एमालेलाई जिताउन जनता आतुर छन « Pana Khabar
मधेश बिरोधि कांग्रेस, माओवादी र राजपालाई सजाय दिएर मधेशप्रेमी एमालेलाई जिताउन जनता आतुर छन
माधव कुमार नेपालको आक्रोश “म जस्तो मधेश भक्त अरु कोइ छ? देखाउनुहोस !
यस क्षेत्रका जनता निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि निकै उत्साहित पाएको छु । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि प्रदेश नम्बर को चुनावमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । मधेशका जनताले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई गम्भीर आरोप लगाएका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा ढिलो चुनाव गराएकोप्रति मधेशी जनताको गुनासो छ । पहिलो चरणमा नै यस क्षेत्रमा चुनाव गरिदिएको भए विकासका कामले गति लिइसक्थ्यो ।
तर त्यसो हुन नपाउनुमा कांग्रेस र माओवादी प्रमुख कारण हो भन्ने ठहर मधेशी जनताको छ । मधेशी जनताले भनेका छन्, हामीलाई पछाडि पार्ने काम भयो, अब चुनावमा त्यसको नतिजा देखाइदिन्छौँ । मधेशी जनता कांग्रेस र माओवादीलाई सजाय दिन तयार भएर बसेका छन् । त्यस्तै राजपालाई हराउनका लागि पनि यहाँका जनता उद्धत भएर बसेका छन् ।
त्यो कुरा जनताले होइन, कोही नेताले भनेको हुन सक्छ । नेताको कुरा छाड्नुस्, जनताले के भन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । जनताले त गास बास र कपास खोजेका छन् ।
बाढीको प्रकोप रोक्न र खेतबारीमा सिँचाई पु¥याउनका लागि जनताले आग्रह गरेका छन् । शिक्षा र रोजगारीको अवसर खोजेका छन् । मधेशी जनताको यि माग सम्बोधन गर्नका लागि नेकपा एमाले मात्रै प्रतिबद्ध छ ।
प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय चुनावमा सबै दलका नेताहरुले आफ्नो दल सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित हुने दाबी गरेका छन् । मधेशी जनताको हितमा आफ्नै दल मात्र रहेको सबैको दाबी छ । नेकपा एमालेलाई भने मधेश विरोधी दलको आरोप लगाइएको छ । यसै सन्दर्भमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग ऋषि धमलाले नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको चुनाव केन्द्रित अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश ।